MPTDN : tsy misy ambonin’ny lalàna | NewsMada
MPTDN : tsy misy ambonin’ny lalàna
Hentitra ny minisiteran’ny Paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana ny niomerika (MPTDN) amin’ny fampiharana ny fanjakana tan-dalàna, tarihin’ny minisitra Rakotomamonjy Neypatraiky. Hanamarinana izany, tsy azo ekena intsony ny karatra Sim miasa nefa tsy misoratra amin’izay mampiasa azy. Efa nampilaza ireo mpandraharaha amin’ny fifandraisan-davitra ny MPTDN, fa hotorina ireo minia mivarotra karatra Sim tsy misoratra amin’ny mividy azy. Tsy azo atao intsony koa ny manafatra sy mampiditra eto Madagasikara ny karazana finday tsy misy laharana IMEI. Nomena 18 volana ireo mpivarotra hivarotany ny tahiry eo am-pelatanany ka tsy azo atao intsony ny mivarotra finday tsy misy laharana IMEI manomboka ny volana jona 2019.
Nakatona ny onjam-peo 12
Eo amin’ny fanaraha-maso, nahatratra 12 ny onjam-peo nakatona noho ny tsy fanarahan-dalàna. Fanapahan-kevitra teknika tanteraka ny noraisina fa tsy misy lafiny politika. Tsy nanome fahazoan-dalana (licence) vaovao intsony ny MPTDN nanomboka ny taona 2014, na ho an’ny olona ao amin’ny fitondrana na ivelany.
Voarara koa ny fampiasana tsy nahazoana alalana ny tambajotra Vsat satellite, nanomboka ny oktobra 2014. Na orinasam-panjakana aza, tsy azo ekena ary ampiharina ny lalàna raha mampiasa ity tambajotra Vsat ity, nefa tsy nahazo alalana. Hogiazana ny fitaovan’ireo mampiasa izany nefa tsy nahazo “licence”. Antony, voafehin’ny lalàna ny rehetra tsy ankanavaka. Voasokajy ao anatin’izany ny fanambaram-pananana ataon’ireo mpitantana ambony ao amin’ny MPTDN, isaky ny roa taona.
Une réponse à "MPTDN : tsy misy ambonin’ny lalàna"
bordeaux33000 04/02/2018 à 00:08
Tsy mis y ambonin NY lalana afatsy izahay am hvm.navita zavatra tsar à indrindra nandritra NY tetezamita ka nahavariana NY vahoaka dia la y izahay hvm tsy nisy antoko politika nanohana anay fa vahoaka tonga dia nifidy hvm satria be dia be ny foto drafitr asa vitanay hvm nandritra NY tetezamita ‘. Ka noho izany no mahatong izahay ambonin NY lalana..TS azo samborina izahay.akatonay NY radio nizay mitsikera anay fatra manaja lalaana vélo à sy manaja zato isan jato NY lalam panorenana rehetra.tsy maintsy manao resaka tsara aho et devant journaliste sao tapaka NY sotro fihiinanako.art tsy maints mahay miteny tsara aho aminareo vahoaka ambakainay .